Sida loo geliyaan HD Videos in YouTube Effortlessly
> Resource > Video > Sida loo geliyaan HD Videos in YouTube
YouTube ayaa hadda isticmaala bixiyeen awood u leh inay geliyaan High Definiation videos in YouTube, laakiin natiijada Upload had iyo jeer waa lagu qancin. Waxaa weli laga yaabaa inay qaadato wakhti badan si ay u geliyaan a video HD yar-yar xajmi in YouTube, ama tayada video on YouTube waa yaraadeen. Waa hagaag, waxa sida ugu wanaagsan ee HD geliyaan si ay u YouTube? Sida xaqiiqada ah xal ku qoran this article waxaad ka dhergin doonaa.
Taasi waa in la isticmaalo Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxaa si toos ah ula horena ah filaayo in YouTube bixisaa dadka isticmaala iyo saamaxaya kuwa isticmaala inay qarka u saaran xallinta video sida 720p iyo 1080p iwm Waxaa loola jeedaa dadka isticmaala si fudud oo dhaqso gali kartaa HD videos, oo ay ka mid yihiin 720p ama 1080p in YouTube. Iyo video tayada uploaded weli wuu dhawri doonaa si tayo sare. Waxaa jira wax kale oo muhiim ah in aad u baahan tahay inaad aragto. Haddii HD videos aad aan la gelin karo in YouTube sababtoo ah incompatibility, app this sidoo kale ku siinaysaa awood u leeyahay inuu sameeyo videos HD si buuxda u la jaan qaada YouTube.
Geedi socodka oo dhan u baahan yahay oo kaliya qasabno yar oo dhowr daqiiqo. Ka dib markii in, waxaad isticmaali kartaa si la mid ah u rara HD videos in aad isticmaasho si ay u daabacaan heerka videos in YouTube. Just raac tilmaan-hoose talaabo talaabo ah.
1 Import videos in HD si Converter YouTube
Ka dib kuu soo ordi app, waxaad uun jiidi xaafaddaada HD video files ka your computer si daaqadan app ee diinta video. Haddii kale, waxaad riixi kartaa batoonka Add Files uu furmo suuqa ka dib markii app tani waxaa la furay, ka dibna uu furmo suuqa pop-up a idinku hanuunin dajiyaan videos HD aad rabto in aad ka PC.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baahan tahay si kor videos ka hor inta in YouTube, sida abuurka, qoqobada, falinjeeerka, isagoo intaa ku daray Cinwaan ama watermark iwm, waxaad riix doorasho Edit mid ka mid ah baararka video shayga.
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay inaad doorato qaabka filaayo in YouTube. Marka hore, la furo liiska qaabka hoos-hoos ku Murayaad Qaabka Output ah, ka dibna la furo category Qaabka ah, ee soo socda, si ay u tagaan subcategory Web ah, iyo ugu dambaysta, dooranayaan YouTube ku jira liiska qaabka wax soo saarka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baahan tahay si ay u dejiyaan qaar ka mid ah video xal in 720p ama 1080p, riix ikhtiyaarka Settings hoose ee suuqa kala tan loo sameeyo. Halkan, waxaad sameysan kartaan koobin video kale haddii baahan.
3 Beddelaan HD si YouTube
Just riix badhanka badalo ku geeska hoose ee saxda ah ee suuqa kala this. Hadda, awoodo aad bar horumarka diinta iyo markii ugu harsan kasta bar video item. Marka dhan videos daray jeesan, waxaad u baahan tahay riix ikhtiyaarka Folder Open hoose ee suuqa si aad u ogaato wax soo saarka, kuwaas oo files. Ogsoonow in qaab beddelidda, horumarka waa mid aad u dhakhso ah.
Hadda, waxaad gali kartaa faylasha saarka HD si YouTube. Sidaas, waxaad ka ciyaari kartaa HD videos on YouTube si guul leh.